Mitandrema amin'ny fampiharana Night Vision Camera! | Androidsis
Fanairana Android!: Tandremo ny fampiharana Night Vision Camera
Ora vitsy lasa izay dia nampahafantariko anao ny fisiana araka ny Kaspersky de Trojan vaovao iray izay hampiasa ny tamba-jotra TOR hanao ny azy fa tsy tsikaritr'ilay mpampiasa na mihoatra aza tsy mamela na inona na inona soritry ny asa ratsy nataony.
Amin'ity tranga vaovao ity ary ary koa asehon'ny namantsika sy ny mpiara-miasa amintsika de Androforall, Chema Alonso, fanta-daza sy malaza Hacker raha nahita kaody ratsy tao amin'ilay fampiharana Fakan-tsary amin'ny Vision Night izay mbola misy ankehitriny ao amin'ny Mividy entana ho fampidinana sy fametrahana mpampiasa Android.
Ilay mpijirika voalaza etsy ambony sy fanta-daza Chema Alonso dia tokony ho nandinika ny apk ilay rindranasa tamim-pitandremana ary nanao azy ho azon'ny tsirairay tao amin'ny bilaoginy manokana ireo ampahany amin'ny kaody izay heverina fa manimba ary hanome alalana ny fampiharana izy ireo mandray sy mandefa SMS ary koa ny fanakanana azy ireo mba tsy hahatsapan'ny mpampiasa fa misoratra anarana amin'ny iray amin'ireo antsoina hoe serivisy an'ny SMS Premium Ampandoaviny vola be dia be ianao isaky ny mandray hafatra vaovao voaray.
Ahoana no ahitanao ny pikantsary izay minitra vitsy lasa izay nataoko tamin'ny solosainako manokana, ny fampiharana mbola misy ao amin'ny fivarotana fampiharana Android ofisialy. Manantena izany ao anatin'ny ora vitsivitsy Google dia nandray fepetra manohitra ity fampiharana voalaza fa manimba ityManentana anao izahay mba tsy hampidina azy io sy amin'izay rehetra nametraka azy, mihazakazaha esory izany ary zahao ny faktiora amin'ny findainao mba tsy hisy fahatairana tsy mahafinaritra amin'ny faran'ny volana.
Fanazavana fanampiny - Fanairana Android!: Trojan TOR voalohany ho an'ny Android hita
Loharano - Androforall
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » fiarovana » Fanairana Android!: Tandremo ny fampiharana Night Vision Camera
@ 202A (@ 202A) dia hoy izy:
Ahoana no ahalalanao fa tsy fanentanana amin'ny fanaovana dokambarotra manohitra ny fampiharana na ny orinasa no mamolavola azy?
Mazava ho azy fa tsy azo atao ny manome ny fitaovana ireo fahaiza-manao ireo. Mazava fa izy io dia fampiharana izay tsy mandoko afa-tsy ny viewfinder an'ny fakantsary, fa avy eo ny rano izay misy kaody ratsy dia nampisotroina tampoka, raha ny tena kely indrindra, tsy fahita.
Ho fanampin'izany, ao amin'ny Google Store dia tsy dia miadana izy ireo ka tsy mamakafaka ireo rindranasa izay mampakatra ao amin'ny magazay. Ampy ny loharanom-pahalalana sy ny mpiasa ananan'izy ireo amin'izany.
Enga anie ny fanononana an'i Google amin'ity lafiny ity fa ny haino aman-jery dia manana ampy hahatratra ny mpampiasa azy.
Valiny any amin'i 202A (@ 202A)
Raha te hahalala ny antony tsy hametrahana azy ary hilaza aminay namana dia mbola azo alaina ao amin'ny Play Store izy io raha te-haka.
Juan Garcia dia hoy izy:
Valiny inona izany Francisco ...
Valiny tamin'i Juan García
Elvis tek dia hoy izy:
Samy pelaka daholo izy ireo: v Ggggg
Valiny tamin'i Elvis Tek
Manomeza gadget iray mahatalanjona ahafahanao mifehy ny fitaovana marani-tsaina rehetra
Webogram, ny kinova Telegram hihodina amin'ny Chrome